Wadashaqeynta udhaxeysa Türk Loydu iyo Havelsan | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraWadashaqaynta internetka ee udhaxeysa Türk Loydu iyo Havelsan
Wadashaqaynta internetka ee udhaxeysa Türk Loydu iyo Havelsan
18 / 12 / 2019 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, GUUD, Headline, ISDIFAACA, TURKEY
iskaashiga internetka ee turk loydu iyo havelsan
Türk Loydu iyo Havelsan waxay saxiixeen borotokool iskaashi xaga amniga internetka. Iyada oo la raacayo borotokool saxeexan, labada hay'adood waxay sii kordhiyeen iskaashigooda socda.
Türk Loydu iyo Havelsan ayaa shaqeeya; badaha, warshadaha, adeegyada tababarka shahaadooyinka, la tashiga, horumarinta xukunka, amniga cyber, digitization, waxqabadka hal abuurka R & D ee suurtagalka ah ee iskaashiga; waxay ka shaqeyn doontaa inay bixiso aqoonsi heer sare ah, badeecadaha amniga adeegyada internetka.
Teknolojiyadda macluumaadka ee loo adeegsado dhammaan qaybaha nolosha waxay keenaan dhibaatooyin nabadgelyo. Nidaamyada amniga internetka, ee door muhiim ah ka ciyaara ka soo kabashada dhibaatooyinka amniga, ayaa muhiim u ah hubinta amniga macluumaadka. Qaab dhismeedka iskaashiga la saxiixay, khubarada Türk Loydu iyo khubarada Havelsan ayaa iska kaashan doona horumarinta tikniyoolajiyadda internetka ee cyber Security waxayna horumarin doonaan alaabada iyo xalalka meelo badan.
Isaga oo faallo ka bixinaya heshiiskii iskaashiga ee la saxiixay, ayuu gudoomiyaha Türk Loydu Foundation Cem Melikoğlu yiri, günümüzde Waa wax aad u muhiim ah in la qaado tillaabooyinka lagama maarmaanka u ah amniga internetka maanta oo macluumaadka nabadgelyadu ay muhiimad weyn siineyso. Iyadoo borotokoolka ay kala saxiixdeen Türk Loydu iyo Havelsan, oo ah mid ka mid ah hay’adihii dowliga ahaa ee ugu muhiimsanaa dalkeena, iskaashi u dhaxeeyay labada hay’adood ayaa la xoojiyay waxaana la qaaday talaabo muhiim ah dhanka hormarinta adeegyada iyo fulinta mashaariicda loogu talagalay macaamiisha Türk Loydu dhanka amniga internetka. Waxaan aaminsanahay in aan fulin doonno mashruucyo badan oo guulo leh oo aan la wadaagno Havelsan dhanka Amniga internetka. “
Ku saabsan Havelsan
Havelsan waa shirkad tikniyoolajiyadeed hormuud ah oo la aasaasay 1982 iyada oo loo sinnaanayo umaddeena. HAVELSAN, ciidamada, labada gudaha iyo dibedda, nidaamo gaar ah qaybta dadweynaha iyo kuwa gaarka ah, taasu waxa weeye qurbaankii xal caqli integrator shirkadda Turkiga leh farsamooyinka ugu dambeeyay ee maanta. Afarta hawlood ee ugu waaweyn Havelsan waa; Taliska Teknolojiyada Difaaca Taliska, Tababbarka iyo Teknolojiyadaha, Nidaamyada Macluumaadka Maareynta Amniga Xalane ee Amniga Internetka.
Havelsan waxay siisaa talis iyo xakameyn tikniyoolajiyadeed ciidamadeena Cirka iyo kuwa Badda iyo sidoo kale jilaayaal leh saamiyo sare oo gudaha ah oo loogu talagalay dhammaan noocyada dhul, bad iyo hawo. Havelsan waa shirkadda ugu weyn ee isbadalka elektarooniga ah ee dalkeenna ka fulisa mashaariicda sida nidaamyada doorashada, diiwaangelinta dhulka iyo macaamil ganacsi iyo shabakadda Garsoorka Qaranka. Isla mar ahaantaa, Havelsan waa xalka wada-shaqeynta aan kala go 'lahayn, aaminka ah ee aaminka ah ee adeegga dalka iyo nidaamyada amniga internetka.
ARUS-HAVELSAN "Iskaashiga xoogan ee Nidaamka Deegaanka Ganacsiga iyo Kordhinta Dibadda"
Adeegyada Tareenka ee Turkiga Loydu oo laga furay Ankara
Turkiga Loydu Stamp on Railways
Wadashaqeynta Wadada Tareenka ee Iskaashiga Dhaqaalaha
Havelsan at EurAsiaRail 2015
Halista ugu weyn ee gaadiidka waa khatar internetka
Qeybta amniga ee internetka, dhalashadu waxay u tahay muhim ahaan dhalashada.
Shirkadda Isgaarsiinta Cyber ​​ee Shirkadda Isgaadhsiinta Casriga ah waxay heshay $ 4.7m si Cylus
TCDD waxay dhameeysaa maamulka khayraadka Havelsan
Wasiirrada Gaadiidka ee Wadamada Wadamada iskaashiga ku hadla ee Turkigu ic
Wadashaqeynta ka dhaxaysa Kosovo iyo Albania ee Gaadiidka
Nidaamka Iskaashiga ee u dhexeeya TCDD iyo Jaamacadda Karatekin
Maanta oo Taariikh ah: 18 Disember 1926 Line Samsun-Sivas Line